भोलि भदौ १४ गते श्री कृष्ण जन्माष्टमीको दिन, कस्तो रहला तपाईको दिन? हेर्नुहोस राशिफल ! - Facebook Khabar
तपाईको तन र मनको स्वास्थ्य मध्यम रहला। खर्चको चिन्ताले मन व्याकुल रहला। बोली र व्यवहारमा ध्यान राख्नुहोला। मनमा नकारात्मक एवम् उदासीनता विचारलाई मनमा आउन नदिनुहोला। आर्थिक दृष्टिकोणले दिन मध्यम फलदायी छ।
शारीरिक वा मानसिक रुपले स्वास्थ्य स्वस्थ रहला। कार्यप्रति एकाग्र बढ्नेछ। धन लाभ होला। परिवारसँग सुखपूर्वक समय बित्नेछ। बढेको आत्मविश्वास अनुभव होला। परिवारसँग सुखपूर्वक दिन बिताउनु हुन्छ।
तपाईको दिन शारीरिक एवम् मानसिक अस्वस्थतामा दिन बित्नेछ। शारीरिक कष्ट , विशेष गरी आँखामा पीडा होला। कुनै पनि कार्य नसोची नगर्नुहोला। आम्दानीभन्दा खर्च धेरै होला। मानसिक चिन्ताको कारण मन निराश रहला। अनुचित कार्यमा शक्ति खर्च होला।
तपाईको दिन आनन्द-उल्लासमा बित्नेछ। व्यापारमा लाभ हुनेछ वा आयको स्रोत बढ्नेछ। मित्रसँग भएको भेट आनन्दमय रहला। विवाह उत्सुकको लागि शुभ दिन छ। शारीरिक एवम् मानसिक स्वास्थ्य राम्रो रहला।
तपाई दृढ मनोबल एवम् आत्मविश्वासबाट हरेक काम सफलतापुर्वक सम्पन्न हुनेछ। व्यवसायको क्षेत्रमा प्रतिभा बढ्न सक्छ। पिताको सम्पत्तिबाट लाभ होला। सरकारसँग पैसाको व्यवहार सफल रहनेछ।
तपाईको दिन शुभ छ। धार्मिक कार्य एवम् यात्राको लागि अनुकुल समय छ। मित्र एवम् आफन्तसँग भेट होला। विदेशगमनोत्सुकको लागि अनुकुल परिस्थिति निर्माण होला। भाई-बहिनीबाट आर्थिक रुपले लाभ मिल्नेछ।
बोली र व्यवहारमा ध्यान राख्नुहोला। सरकार विरोधी प्रवृत्ति , क्रोध एवम् काम वृत्तिबाट टाढा रहनुहोला। नयाँ सम्बन्ध अनिष्टकारक साबित हुनेछ। आर्थिक संकट आउन सक्छ। ईश्वरको आराधना एवम् आध्यात्मिकताले मनलाई शान्ति प्रदान गर्नेछ।
दैनिक कार्यलाई भुलेर आनन्दमय समय बिताउनुहुन्छ। कुनै मनोरंजन स्थल वा पर्यटन स्थलमा जाँदा मन अतिप्रसन्न रहला। समाजमा मान-सम्मान वृद्दि होला। मित्र-आफन्तसँग भ्रमण हुने योग छ।
तपाईको दिन हर्षोल्लासपूर्ण रहनेछ। परिवारमा आनन्दमय वातावरण रहला। व्यवसायको लागि शुभ दिन छ। सहकर्मीको सहयोग मिल्नेछ। आर्थिक लाभ होला। शारीरिक स्वास्थ्य स्वस्थ रहला।
स्वास्थ्यको विषयमा चिन्ताले सताउनेछ। सन्तानसँग मतभेद खडा होला। उच्च अधिकारीको रिसको सामना गर्नुपर्ने छ। सन्तानको स्वास्थ्यमा मतभेद हुनाले स्वास्थ्यको विषयमा चिन्ता रहनेछ।
तपाई निकै संवेदनशिल रहनुहुन्छ। विद्यापार्जन गर्ने व्यक्तिले सफलता प्राप्त गर्नेछन्। आयोजना गरेको हरेक काममा सफलता मिल्नेछ। कार्य गर्दा खास सावधान रहनुहोला। स्त्रीको सौन्दर्य प्रसाधानमा खर्च हुनेछ।
अत्यावश्यक निर्णय लिनको लागि दिन उत्तम छ। तपाईमा सिर्जनात्मक शक्ति वृद्दि हुनेछ। वैचारिक दृढता एवम् मानसिक स्थिरताको कारण कार्य सफलतामा सरलता रहनेछ। जीवनसाथीको पूर्ण सहयोग मिल्नेछ। सामाजिक प्रतिष्ठा वृद्दि होला।